Amin'ny teboka farany ambany - Church of the World of God Switzerland
haino aman-jery > Mifantoha amin'i Jesosy > Mifantoha amin'i Jesosy 2020-03 > Amin'ny teboka ambany
Ny pasitera ao amin'ny fiangonako vao nanatrika ny fivoriana Alkoholika Anony. Tsy hoe noho izy mianadahy fotsiny, fa satria naheno ny tantaran'ny fahombiazan'ny olona izay nahafehy ny lalana 12 mankany amin'ny fiainana tsy misy fiankinan-doha. Ny fitsidihiny dia nivoaka avy amin'ny fahalianana ary ny faniriana hamorona rivo-piainana mitovy amin'ny fiaraha-monina misy azy.
Tonga tao amin'ny fivoriana fotsiny i Mark ary tsy fantany izay hitranga any. Rehefa niditra izy dia voamarika ny fisiany, saingy tsy nisy nametraka fanontaniana mahamenatra azy. Ny olona kosa nanolotra fiarahabana tamim-pitiavana azy na nasetroka azy teo an-damosina rehefa nampahafantatra ny tenany tamin'ireo izay nanatrika teo.
Nahazo loka ny mpandray anjara tamin'io hariva io nandritra ny sivy volana nahalany azy, ary rehefa nivory tao amin'ny podium ny rehetra mba hilazana izy ireo fa tsy nahavita zava-pisotro misy alikaola, dia nantsoin'ny mpijery ny antsoin'ny rivo-doza sy ny tehaka marenina. Saingy avy eo ny vehivavy antitra dia nandeha tamina podium ary niadana sy niankohoka, niankohoka. Hoy izy: “Ankehitriny aho dia tokony hankalaza ny 9 andro tsy nahazatra ahy. Saingy omaly, natolotry izany, nisotro indray aho ».
Mihazakazaka mafana sy mangatsiaka ny lamosiny i Mark, mieritreritra izay hitranga ankehitriny? Firy ny fahafaham-baraka sy henatra no hiatrika an'io tsy fahombiazana miharihary io noho ny tehaka izay vao nanjavona? Saingy, tsy nisy fotoana natokana ho an'ny fahanginana mampatahotra, satria raha vao nandalo ny molotry ny vehivavy ny vaninteny farany, dia nitombo indray ny tehaka, tamin'ity indray mitoraka ity, feno fiotrehana sy fihomehezana ary fanehoam-pankasitrahana mahafinaritra.
Nahatsiaro ho sosotra be i Mark ka voatery nandao ny efitrano. Tao anaty fiara dia navelany nitsoaka nandritra ny adiny iray ny ranomasony vao afaka nitondra fiara izy nody. Nanohy ny fanontaniany foana izy: «Ahoana no ahafahako mampita izany amin'ny fiaraha-monina? Ahoana no ahafahako mamorona toerana iray izay ny fibabohana amin'ny fanakorontanana anaty sy ny maha-olona no raisina miaraka amin'ny tehaka mafana toy ny fandresena sy fahombiazana? » Izany no tokony hisehoan'ny fiangonana!
Fa kosa, maninona ny fiangonana no mitovitovy amin'ny toerana itodiana tsara sy am-bavany ny endrika mahafinaritra no manala ny lafiny maizina amin'ny tenantsika? Manantena fa tsy misy olona mahalala ny tena toetrantsika no hisarika antsika amin'ny fanontaniana tso-po? Jesosy dia nilaza fa ny marary dia mila toerana iray ahafahan'izy ireo manasitrana - saingy namorona klioba sosialy isika mifototra amin'ny fanatanterahana fepetra sasantsasany amin'ny fanekena sasany. Raha ny fahitana ny tsara indrindra eto an-tany, tsy azontsika atao ny mieritreritra ny ho rava amin'izany fotoana izany fa tena tiana tanteraka isika. Angamba izany no tsiambaratelon'ny Alkoholika Anony. Ny mpandray anjara tsirairay dia tonga hatrany amin'ny teboka farany indrindra ary nanaiky izany, ary ny olona rehetra dia nahita toerana iray izay "tiana" azy koa, ary nanaiky an'io toerana io ho an'ny tenany.
Hafa amin'ny Kristianina maro izany. Na izany aza, maro ny antsika no mino fa tiana tsy misy kilema isika. Miaina ny fiainantsika araka izay tratry ny herintsika isika ary avelao ny hafa sy ny tenantsika hahatsapa izany kofehy izany raha tsy azo ihodivirana ka mitondra fahombiazana. Mampalahelo fa amin'ny fitadiavana ny fahamboniana ara-moraly dia afaka miatrika olana ara-panahy bebe kokoa isika fa tsy amin'ny farany.
Nanoratra toy izao i Brennan Manning: «Paradoxically, ny fitsipi-pitondran-tena tafahoatra ary ny fahamendrehana manetriketrika toy ny fehezankevitra eo amin'Andriamanitra sy isika olombelona. Tsy ny sarotra amin'ny mpivaro-tena na ny mpamory hetra no maneho hanenina; tena ilay mazoto amin'ny finoana mino fa tsy mila maneho alahelo izy ireo. Tsy maty teo am-pelatanan'ny mpanondrana olona, ​​mpanolana na jiolahimboto i Jesosy. Nianjera tamin'ny tànan'ny olona mivavaka lalina izy, izay mpikambana lehibe ao amin'ny fiaraha-monina » (Zanaka Abbas's Child Abbas Child, p. 80).
Somary mangovitra ve ianao? Na izany na tsy izany dia nandia fotoan-tsarotra nitelina azy aho ary tsy maintsy miaiky ny tenako, na tiako io na tsia, fa ny Fariseo koa dia milatsaka ato anatiko. Na dia tezitra mafy amin'ny fihetsika fanavakavahana hitanay mandritry ny Filazantsara aza aho, dia manao toy izany koa aho amin'ny tsy firaharahako ireo izay niady sy niaro ny olo-marina. Mamela ny tenako ho jamba an'ireo tia an'Andriamanitra aho amin'ny alàlan'ny tsy fahotako amin'ny ota.
Mpanota i Jesosy. Ny ankamaroan'izy ireo dia nanana izay fantatra amin'ny hoe "taloha". Nantsoin'i Jesosy hoe rahalahiny izy. Betsaka koa no nahalala hoe manao ahoana ny fikapohana ny ambany vatolampy. Ary teo no tena nahitany an'i Jesosy.
Tsy te-hijoro eo ambonin'izay mandeha amin'ny maizina intsony aho. Na te hanao tenim-poana tsy misy dikany koa aho araka ny teny filamatra hoe "nolazaiko anao avy hatrany", raha izaho kosa dia manafina ny lafiny maizina amin'ny fisiako. Tiako ho voasarik'Andriamanitra bebe kokoa sy hiatrika ilay zanaka adala amin'ny fitaovam-piadiana misokatra tahaka ny nataony tamin'ny mpankatò tamin'ny alàlan'i Jesosy Kristy. Tiany mitovy izy. Ny alikaola tsy fantatra anarana dia efa mahalala izany.